တကယ်ရော ထူးခြားသွားလား Learning English FromaMotivational Story - Myanmar Network
တကယ်ရော ထူးခြားသွားလား Learning English FromaMotivational Story
Posted by Learner on November 27, 2013 at 1:17 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကမ်းခြေတစ်ခုဆီသို့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကြယ်ငါးကလေးတွေ ရာပေါင်းများစွာ နက်နက်စောစော ဒီရေနဲ့အတူပါလာပြီး ဒီရေကျသွားတဲ့အခါ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ
တင်ကျန်ရစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူဟာ တကယ်လို့ နံနက်နေထွက်လာရင် သောင်ပြင်ပေါ်တင်ကျန်ရစ်ရှာတဲ့ ကြယ်ငါးကလေးတွေ သေ
ကုန်တော့မှာဘဲလို့ စိုးရိမ်စိတ်ဝင် မိသတဲ့။ ဒါနဲ့ ငါးကလေး တစ်ကောင်းချင်းစီကိုလိုက်ကောက်ပြီးရေထဲကို ပြန်လည်ပစ်ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ငါးကလေးတွေက အများကြီးဆိုတာ သူ ပြန်ပြီး ရေထဲကို ပစ်မြှောက်ရတာ ဘယ်နိုင်မှာတုန်းနော်။ မရပ်မနားလုပ်ရတာပေါ့။ သူအဲလို လုပ်နေတာ ကို
သူနောက်မှာ ရောက်နေတဲ့ အခြားသူတစ်ဦးတွေ့မြင်သွားသတဲ့။ တွေ့မြင်သွားသူဟာ သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို နားမလည်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ ငါးကလေးတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ထံသွားပြီးတော့..
" ခင်ဗျား...ဘာလုပ်နေတာလဲဗျ...ငါးတွေက ရာချီပြီးရှိတာ...ခင်ဗျား ဘယ်နှစ်ကောင်ကယ်နိုင်
မှာမို့လဲ....ဘာထူးမှာ မို့လဲဗျာ" လို့မေးလိုက်ပါတယ်။
ငါးကယ်တင်ရှင် က ချက်ချင်း ပြန်မဖြေဘဲ...သူ့ရှေ့နားက ငါးလေးတစ်ကောင်ကိုကောက်ယူ
ရေထဲကို ပြန်လည်ပစ်မြှောက်လိုက်ပြီး ....
" ဟော ဒီ တစ်ကောင် အတွက်တော့ ထူးတာပေါ့ ဗျာ" ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
There wasaman takingamorning walk at the beach. He saw that along with the morning tide came hundreds of starfish and when the tide receded, they were left behind and with the morning sun rays, they would die. The tide was fresh and the starfish were alive. The man tookafew steps, picked one and threw it into the water. He did that repeatedly. Right behind him there was another person who couldn't understand what this man was doing. He caught up with him and asked, "What are you doing? There are hundreds of starfish. How many can you help? What difference does it make?" This man did not reply, took two more steps, picked up another one, threw it into the water, and said, "It makesadifference to this one."
သူငယ်ချင်းများ အတွေးနက်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုင်ကြပါစေ....
Permalink Reply by nectar moon on November 28, 2013 at 14:58
Permalink Reply by CHIT THU on November 30, 2013 at 23:19
Permalink Reply by venus on December 2, 2013 at 16:26